Patria, iro basa rakatsaura Fernando Aramburu | Zvazvino Zvinyorwa
Homeland yeFernando Aramburu.
Patria Inotorwa sebasa rekutsaurira remunyori wechiSpanish Fernando Aramburu, nekuda kwekuti, yakagashirwa nemubhadharo wakazara weNational Narrative Award 2017. Iyo inyaya isina tsarukano pamusoro penzanga yeBasque iri pakati peyakaomarara mamiriro ezvematongerwo enyika ayo akashungurudza dunhu reBasque kubva muchikamu chechipiri chezana ramakore rechimakumi maviri kusvika kutanga kwemireniyumu itsva.
Kupatsanurwa kwakaitwa nehurongwa hwekuzvimiririra muBasque Nyika kwakonzera mhedzisiro inoshamisa nanhasi, sezvakaratidzirwa nezviratidziro zvenguva pfupi yapfuura nekuda kwekuburitswa kwevanhu kwakabatana nezviito zveboka rinoparadzanisa reETA kana mumitambo yenhabvu pakati peAtletic Club de Bilbao neReal Sociedad de San Sebastián, vane mafeni avo vakadaidzira kudanidzira kwekuzvidza nehukuru hwezvematongerwo enyika. uye kanopfuura kamwechete chiitiko chakatosvika pakukonana chaiko.
2 Unyanzvi hwenharo yePatria
3 Kukudziridza nyaya
3.1 Kurwisana kwezvematongerwo enyika pakati peEta neBasque Nyika
3.2 Kururamisa kwenyaya yacho
3.3 Nhoroondo inonyudza
3.4 Iyo "hapana pfungwa yezvakaipa" senzvimbo yekurangana
Fernando Aramburu akaberekerwa muSan Sebastián, Spain, muna 1959. Akakurira mumhuri ine mari shoma uye akapedza kudzidza mu1982 aine BA muSpanish Philosophy kubva kuYunivhesiti yeZaragoza. Aive chikamu chekuvambwa kweGrupo CLOC de Arte y Desarte, ainyanya kufunga nezve surrealism uye tsika yekurima. Kubva 1985 akatamira kuHannover, Germany.
Nyika yeGerman yaizove nzvimbo yake yekugara, imomo akaroora, akaita vana vake vaviri uye akashanda semudzidzisi wechiSpanish kune vazukuru vevatorwa muRhineland, basa raakaita kusvikira muna 2009, paakafunga kuzvipira iye oga kune zvinyorwa. Panguva ino, Aramburu anga atove nemakore gumi nemana kubvira pakaburitswa bhuku rake rekutanga, Moto ine ndimu (1996).
Kuzivikanwa kwake kwekutanga kwakakosha kwakauya kubva muruoko rwe Anononoka makore, rake rechitanhatu rakaburitswa bhuku, anokunda iyo Tusquets Novel Prize muna 2011. Kutanga kwe Patria misi kubva muna2016, kurondedzerwa kwake kwemapeji anopfuura mazana matanhatu pamhirizhonga yaigara munyika yekwake kwaive kubudirira pakati pevatsoropodzi uye neruzhinji, zvichiratidzwa nemubairo wake wakawandisa waakawana, pakati pawo ndiwo Mubayiro weVatsoropodzi wa600 uye naFrancisco Umbral Mubayiro weBhuku regore. Hazvina basa iro bhuku rave imwe yeanonyanya kuverengerwa kuSpain, Mexico, Argentina neColombia.
Imwe yemabhuku akakosha aFernando Aramburu ndeaya Hwamanda yeUtopia (2003), Kutorwa kumafirimu ane zita re Pasi penyeredzi (2007). Iyi firimu ficha yaizohwina mibairo miviri ine mukurumbira yeGoya. Munyori weBasque akamirawo pabasa rake semuturikiri, mudetembi uye murondedzeri wenhau dzevana; Mumakore achangopfuura akapinda mune aphorism genre kuburikidza nezvakasiyana zvinyorwa (kunyanya mupepanhau El País).
Unyanzvi hwenharo yePatria
Ipo nharo ye Patria yakanyatsotarisana nedunhu reBasque, iyo rondedzero yematanho anotungamira kune ezvematongerwo enyika radicalism ndicho chinangwa chinodarika miganhu, ine hunhu hwakajairika munzvimbo dzakasiyana kwazvinoitika. Kunyangwe paine chokwadi chekuti nyika yega yega ine zvayakanakira, kukakavadzana kwenzvimbo uye kupatsanurwa kweHurumende zvinowanzotungamira mukukonana nekufa, hazvidzivirike here?
Nyaya dzakadai sekurevererwa kwekodzero dzevanhu, hugandanga, hunhu hwetsika uye kupatsanurwa kwemhuri uye nzanga semhedzisiro yehunhu hwesimba zvinoratidzwa munhoroondo yazvino yenyika zhinji. Nyaya dzeva protagonists nezve kudzikira kwekubatana kwevanhu vari kunyanya kufamba mudenderedzwa rake repedyo revanhu.
Homeland phrase naFernando Aramburu.
Neichi chikonzero, Patria Iko kuverenga kwakakurudzirwa kwazvo kuti unzwisise mashandiro ehukama hwepasi rose munyika nhasi. Pamusoro pezvo, Fernando Aramburu anokwanisa kuchengetedza muverengi kukochekera kubva pakutanga kusvika kumagumo mune ino novel nekuda kwemarondedzero ayo uye kuiswa kwezviitiko chaizvo.
Kurwisana kwezvematongerwo enyika pakati peEta neBasque Nyika
Aramburu yakagadzira basa rinotaura nezve chimwe cheakaipisisa (kana zvisiri chakaipisisa) zviitiko zvakaitika munhoroondo yezvazvino yeSpain. Iyo inoratidza kukakavara kwezvematongerwo enyika pakati peETA neBasque Nyika mune kwayo kwese kusviba. Humwe hwehunhu hwayo hukuru ndiko kuburitswa kwemaonero akasiyana, zvichipa iyi nyaya ine poindi yakakosha yekutarisa nekupa nzvimbo kune ese manzwi anobatanidzwa.
Kururamisa kwenyaya yacho
Saka iyo yekutanga pfungwa iyo muverengi anowana ipfungwa yekuenzanirana. Izvi zvinonetsa kuzadzikisa kana iwe ukafunga marwariro aingaite kune mhuri dzevakabatwa. In consecuense, zvinowirirana zvizere mukati meiyoyo rondedzero mazwi e "gandanga" pamwe neayo e gudari (musoja). Idzi pfungwa mbiri dzinoreva kune ETA murume akatongerwa kujeri.
Iyo inoverengeka inotarisa pahupenyu muBasque Nyika mushure meETA yaramba kurwa kwehondo. Kurwadziwa kwemhuri, vese vakaurayiwa nevaya vari mutirongo, kunofanirwa kukundwa kuitira kuporesa maronda kuitira kuti vagadzire nzanga umo munhu wese anokwanisa kutsungirira mumwe nemumwe kugara pamwe murunyararo. Anopfuura mapeji mazana matanhatu panenyaya yakaoma kudaro anogona kunetsa.
Zvisinei, kuvakwa kwemavara akaitwa naFernando Aramburu anokurumidza kuvharidzira muverengi. Munyori anogadzira rondedzero inoyerera inonyatsosiyaniswa nemhepo yakaoma uye yakaomarara panoitika zviitiko. Izvo zvisingazivikanwe zvakakomberedza vamwe veva protagonist hazvina kugadziriswa kusvika iwo ekupedzisira mapeji einovhero. Izvi zvataurwa pamusoro ndizvo zvakakosha kuchikamu chemunyori kuchengetedza kufarira kwemuverengi.
Pamusoro pe, munyori anotsanangura nenzira yehunyanzvi vanhu veBasque. Aramburu akasimbisa hunhu hwakanaka, kunanga, kutendeseka kwevatorwa uye gakava rezvematongerwo enyika rakasarudzira vanhu. Munyori akapawo kutya sechikonzero chekuparara kwenzanga, kupfuura kutongwa kwevamwe vatambi.
Iyo "hapana pfungwa yezvakaipa" senzvimbo yekurangana
Patria ingano inongotungamira mukufungisisa kwakadzama nemaSpanish pamatanho ekuparadzanisa muEuskadi uye, munguva pfupi yapfuura, muCatalonia. Kunyangwe iye asingataure zvakananga kuti kana kwaive nekushungurudzwa nehurumende yeSpain, Aramburu akaburitsa pachena kuti danho repamutemo rinofanira kuremekedzwa nguva dzese.
Pakupedzisira, Zvinogona kutaurwa kuti meseji ine simba rakanyanya iyo munyori anosiya nebasa rake ndeyekunongedza kusava nebasa kwehuipi. Hazvina mhosva kuti zvinobva kupi, hapana chikonzero. Izvo hazvisi chokwadi chinogamuchira hafu yezviyero kana nzvimbo dzepakati, zvakaipa hazvigone kururamiswa pasi pemamiriro api zvawo, zvisinei zvakanyanya. Nongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Homeland yeFernando Aramburu